Madaxweynaha Kenya oo Madaxtooyada ku qaabilay Madaxda Degmada Mandheera (Daawo Sawirada) - iftineducation.com
iftineducation.com – Madaxweynaha Dowladda Kenya Uhuru Kenyatta, ayaa waxa uu maanta kulan ballaaran uu la qaatay Madaxda Magaalada Mandheera ee Gobolka Waqooyi Bari ee Wadanka Kenya.
Madaxweynaha, ayaa Masuuliyiintaan ku qaabilay Aqalka Madaxtooyada ee Magaalada Nairobi, waxayna kulankoodaan si dhow ay uga hadleen weerarada soo noq noqday ee Shabaabku ka geysanayaan duleedyada Mandheera.
Gaba gabadii kulanka, ayaa waxaa Saxaafada la hadlay Gudoomiyaha Magaalada Mandheera Ali Roba, wuxuuna si kulul uu u weeraray Ururka Al Shabaab.
Gudoomiyaha, ayaa waxa uu si adag uu Shabaabku ugu eedeeyay inay ka been abuuranayaan Diinta Islaamka, isla-markaana ay sameynayaan falal aad u guracan, oo Islaamnimada ka fog.
Roba, ayaa waxa uu shacabka reer Kenya uu ka codsaday in aragti mideysan ay ka yeeshaan la dagaalanka Al Shabaab, maadaama ay yihiin kuwo ka been sheegaaya Diinta Islaamka, sida uu yiri. Sidoo kalana loo baahan yahay in laga fogaado in dad Muslimiin ah loo dhibaateeyo, falalka ay geysanayaan Shabaabku.
Dhanka kale Uhuru Kenyatta, ayaa bogga uu ku lee yahay Shabakada Bulshada Xiriirisa ee Facebook ku sheegay, in Madaxda Mandheera uu si qoto dheer leh ugala hadlay arrinta ku aadan weerarada ku soo badanaaya Mandheera.
Kulankaan, ayaa yimid xilli Madaxweynaha Kenya uu Talaadadii sheegay inay qaadi doonaan tallaabooyin, ay wax kaga qabanayaan amni darada ku soo badaneysa Gobolka Waqooyi Bari Kenya.
Cali Dheere “Kenya dagaalka maka joogsan doono, inta ay dalkeena duulaanka ku tahay”